Aiza ilay Qatari mpiaro ny zon’olombelona Noof Al-Maadeed? · Global Voices teny Malagasy
Ahiana mafy ny ain'ity 23 taona ity eo am-pelatanan'ny fianakaviany
Voadika ny 06 Janoary 2022 4:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Nederlands, عربي, English
Pikantsarin'i Noof Al-Maadeed avy amin'ny horonantsary YouTube mitondra ny lohateny hoe عودة #نوف_المعاضيد الى قطر ٢٠٢١ (Ny fiverenan'i #Noof_AlMaadeed ao Qatar 2021), navoaka tamin'ny 6 oktobra 2021
Ny ranty etoana dia nosoratan'i Khalid Ibrahim, tale mpanatanteraky ny Gulf Center for Human Rights (GCHR), fikambanana mahaleotena, tsy mitady tombombarotra mampiroborobo ny fahalalaham-panehoan-kevitra, hanao fikambanana, sy hivory am-pilaminana ao amin'ny faritra AAAA (MENA).
Noof Al-Maadeed, dia vehivavy Qatari 23 taona, manan-kambo sy avo fanantenana. Nandositra ny fireneny ho any Angletera tamin'ny fampiasana ny findain'ny rainy antsokosoko hahazoany mandeha (any ivelany) izy rehefa niatrika herisetra ataon'ny fianakaviany, anisan'izany ny rainy, ary tsy nanolo-tanana hiaro azy mihitsy ny andrim-panjakana ao amin'ny governemanta. Tamin'ny antsafa tamin'ny fahitalavitra tamin'ny 4 aogositra 2020, nilaza ny fandosirany avy ao Qatar ho any Angletera, nandalo Okraina tamin'ny 26 novambra 2019 izy.
Nangataka fialokalofana izy tamin'ny fahatongavany tao Angletera. Nandritra ny fijanonany tao Angletera, nanondro ny tenany ho mpiaro ny zon'ny vehivavy Qatari i Al-Maadeed ary nohazavainy fa ny fiambenan-dahy ny vavy no manakana ny vehivavy tsy hiasa na handeha raha tsy misy fankatoavan'ny lehilahy iray ao amin'ny fianakaviana, ary nohazavainy ihany koa fa zara raha mety hahazo fiarovana ny vehivavy tratran'ny herisetra an-tokantrano.
Nanafoana ny fangatahany fialofana tao Angletera i Al-Maadeed rehefa nanomba antoka ny manampahefana Qatari fa ho arovana izy raha miverina an-tanindrazana. Tamin'ny 6 Oktobra tamin'io taona io, nandranty horonantsary tao amin'ny kaontiny Instagram i Al-Maadeed izay nanazavany amin'ny antsipiriany ny fiverenany avy ao Londra ny 30 septambra ho ao an-drenivohitra Doha nahatongavany ny ampitson'io.
Tsy misy na inona na inona mazava taorian'izany. Niala tamin'ny fampanantenana rehetra nataony milaza hiaro azy, tahaka ny tokony hiarovany ny olompirenena rehetra, ny manampahefana Qatari ka navelany hiajadian'ny herisetra an-tokantrano ravehivavy.
Tao amin'ny horonantsary navoakany tao amin'ny kaontiny Twitter tamin'ny 12 oktobra, nilaza i Al-Maadeed fa in-telo izao no nikasa hamono azy ny fianakaviany saingy tsy nahomby izany. Nosoritsoritany ihany koa ny fahatongavan'ny rainy tao amin'ny lobby (efitra midadasika fandraisana olona) ao amin'ny hotel iantranoany, na dia io aza no tena mifanoloana aminy sy anton'ny fandosirany hiala ny trano. Angamba ny sioka manaraka, tamin'ny datin'ny 12 Oktobra, no mamehy ampahitsiana ny hirifiry ianjadiany tamin'ny fiverenany an-tanindrazany:
Te-handatsaka ny aiko ny fianakaviako, izay heveriko ho ahy.
Taoriana kelin'izany izy namoaka ity sioka manaraka ity:
“Sheikh Tamim irery no hany afa-manajanona ny loza amin'ny fiainako amin'ny tanany.”
Tamin'ny 13 oktobra, nanjavona tanteraka tao amin'ny media sosialy i Al-Maadeed, ary tsy mbola fantatra izay nanjo azy. Tsy afa-nanome ny fiarovana nilain'ny olompirenena iray izay tsy nanao fihoaram-pefy sady niverina an-tsitrapo tao an-tanindrazany izay mifototra amin'ny fampanantenana maro nataon'ny manampahefana fa hiaro azy ny Emiran'i Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, izay nanankinan'i Al-Maadeed ny fiarovana azy sy nangatahany fanohanana.
Nisafotofoto ny tati-baovao hatramin'ny nanjavonan'ity olona 23 taona ity. Araka ny tatitra sasany, novonoin'ny fianakaviany i Al-Maadeed, raha mitatitra kosa ny hafa fa nohazonina an-katerena tao amin'ny hopitalin'ny marary saina tsindronina fampitoniana maro dia maro izy. Mandritra izany fotoana izany ny governemanta Qatari tsy mety manome rakitra torohay manaporofo fa velona izy, ka miteraka ahiahy maro izany.
Tsy afa-manamarina amin'ireo tatitra voatonona etsy ambony ny Gulf Center for Human Rights (Foiben'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Helodrano) fa mitàna ny manampahefana izany nampanantena saingy tsy niaro an'i Noof Al-Maadeed, ho tompon'andraikitra amin'izay mety nihatra taminy. Amin'izao fotoana izao ny torohay rehetra dia manondro fa mitatao loza goavana ny ain'i Al-Maadeed sy ny fahafahany. Raha tsy maty novonoina izy dia mety ho nohazonina fotoana maharitra any amin'ny toerana miafina, izay mitera-doza ho an'ny fiainany.
Mbola miantso ny firaisamonina iraisampirenena indray, indrindra fa ireo andry ao amin'ny Firenena Mikambana sy ireo governemanta manana tara-panintonana ao Qatar—ao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana— ny GCHR, mba handray fepetra avy hatrany hanery ny manampahefana Qatari hanome antoka fa tsy maninona i Al-Maadeed ary afa-miaina an-kalalahana ao Qatar.
Tsy ho afa-tsy miraharaha ny hevitry ny iraisampirenena izay mitady ny marina ny governemantan'i Qatar, ary ny fahanginany tanteraka dia ho fanamelohana tokoa, noho ny fihazonany andraikitra feno amin'ny fitandroana ny filaminan'ny olom-pireneny, ao anatin'izany i Nouf Al-Maadeed.